Isinciphisi sesantya ngokubanzi sisiqwenga somatshini esilula. Olu loliwe nje wokuhamba phakathi kwemoto noomatshini oqhele ukusetyenziselwa ukunciphisa isantya esidluliselwa ngamandla. Isinciphisi sokukhawulezisa, esikwabizwa ngokuba sisinciphisi segiye, sisixhobo esisebenzisa ubukhulu becala iinjongo ezimbini.
Ukusetyenziswa okubalulekileyo kwesi sixhobo sokulinganisa kukuphinda umlinganiso we-torque eveliswe ngumthombo wolwazi wamandla wokwandisa umlinganiso womsebenzi onokusebenziseka. Kukulungele ukufumana ifayile ye- umenzi oyingcali weegiye kunye neebhokisi zegiya kunye nesantya sokunciphisa ukufumana imveliso ekumgangatho ophezulu. Apha ngezantsi, ndiza kwabelana ngezinto ezithile malunga nokucutha isantya ekufuneka uyazi.
1. Ukusetyenziswa kweeNcitshisi zokuCutha
Izinciphisi zesantya zihlala zisetyenziselwa ukusebenza kweentlobo ezahlukeneyo zoomatshini bemizi-mveliso kunye nabasekhaya abafuna ukunciphisa isantya semoto yombane ngokufanelekileyo nangokukhuselekileyo. Kuyanceda ukulungelelanisa isantya seemoto ekuboneleleni ngetorque efunekayo kumatshini ukuze usebenze ngokufanelekileyo.
Ukusukela inkqubo yothumelo, bema ngaphandle ngenxa yokuntsonkotha kwabo, zinoluhlu olubanzi lweenkqubo zokunciphisa isantya ezikhoyo ngokuhambelana nemfuno kunye neenkcukacha zesicelo.
2. Izinto eziBumba isiNciphisi sokuCutha
Kukho izinto ezithile ezenza ukunciphisa isantya, kubandakanya:
Ngamandla ajikelezayo abonakaliswe kwiiyunithi zekhilogrethi ngemitha, iNewton ngemitha nganye, okanye iipawundi ngeenyawo. Xa i-torque idityaniswa nexesha lokuphumeza, iyajika ibe ngamandla.
Imoto yombane iza namandla athile achazwe kwi-HP. Inesantya esisebenzayo sokukhupha ishafti. Zombini ezi mpawu zeemoto zombane, amandla kunye nesantya, zichaza i-torque enokubonelela ngayo. Kwaye i-toque iyanceda ukumisela ukuba umthwalo uza kujika okanye hayi.
Yindlela yokuhambisa edityaniswe nezinto ezisetyenziswayo ezibonelela ngokunciphisa isantya ngokufanelekileyo kwaye zonyusa ukuhambisa torque. Zonke izinto zeli candelo zibalulekile. Ifuna ijiyometri egqibeleleyo kunye nokwenziwa kwenkqubo eyiyo yokusebenza.
3. Uyilo lokunciphisa isantya
Ngaphambi kokungena kwiinkcukacha zoyilo lokunciphisa isantya, kuya kufuneka uyazi malunga nezinto zenkonzo ekubhekiswa kuzo kwimeko echaphazela ngokubanzi okanye eyonyusa ibango lamandla kwibhokisi yezixhobo. Inokuba inxulumene nothuli kunye nokufuma okuhambelana, isixa sokungcangcazela ukumelana, okanye inani lemijikelezo yokusebenza. Ukuncipha kwempembelelo yento yenkonzo sisiphumo sokuba nolwazi olunzulu ngokusebenza kwangaphakathi kwesinciphisi kunye nokunyusa uyilo lwendlela yayo yonke yokuhambisa.
Ezi zezinye zezinto ezibalulekileyo ekufuneka uzazi malunga nokunciphisa isantya. Unokufumana enye yezona zinto ziphambili ezenza ukunciphisa isantya, umbungu wokunciphisa izixhobo, iihelical gear, izixhobo zeetrektara, iibhokisi zegiya yezolimo, kunye nabanye abaninzi ukuba bathenge iimveliso ezikumgangatho ophezulu ngamaxabiso afikelelekayo.